Warshadda - Jiangsu Senwei Electronics Co., Ltd.
Maareynta Korantada Warshadaha
Ku habboon qalabka elektiroonigga ah, gawaarida, birta, mashiinnada, cuntada, daawada iwm.
Habka dhaqameed ee lagu cabiro isticmaalka tamarta ee noocyada kala duwan ee wershadaha waxay ku dambaysaa mid aan dhammaystirnayn, khalad ah iyo xog ku saabsan isticmaalka tamarta oo aan dhammaystirnayn, taas oo ka dhigaysa wax aan suurtagal ahayn in la falanqeeyo oo la baadho isticmaalka korantada, taasoo dhalisay maarayn aan ku filnayn oo isticmaalka korantada iyo qalab kala duwan Ma jiro wax-ku-ool ah. macnaheedu waa in la xakameeyo isticmaalka tamarta, sidaa darteed waxaa jira wasakh badan oo koronto. Nidaamka kormeerka korantada ee warshadda soosaarista warshada wireless-ka ayaa ururin kara oo gudbin kara xogta isticmaalka korantada ee qalabka kala duwan ee warshadda waqtiga dhabta ah, taas oo ku habboon maareeyayaasha inay la socdaan oo ay falanqeeyaan isticmaalka korantada ee warshadda oo dhan waqti kasta, si loo xoojiyo. maareynta isticmaalka korantada ee warshadaha, yareyso isticmaalka awooda oo soosaara faa'iidooyinka badbaadinta tamarta.
Xalka maaraynta wax soosaarka warshadaha wuxuu isku daraa iridaha caqliga leh, cabbiraadda caqliga leh iyo aaladaha xakamaynta, kuwa badala xogta caqliga leh, aaladaha kormeerka awooda iyo agabyada kale ee warshadaha. Waxaa ka mid ah, mitirka awoodda badan ee shaqada ayaa mas'uul ka ah aruurinta cabbiridda awoodda korantada iyo xogta tayada awoodda ee aaladaha kaladuwan ee tamarta ee aag kasta oo warshad ah, iyo u gudbinta dhammaan xogta isticmaalka tamarta ee geedka nidaamka maaraynta tamarta ee caqliga leh. mashiinka maaraynta isgaarsiinta, si aragga isha loogu hayo xogta isticmaalka tamarta iyo falanqaynta, ka caawinta adeegsadayaasha inay ogaadaan meel ku keydsan tamarta, waxay siiyaan taageerada macluumaadka tamarta ee loogu talagalay isticmaaleyaasha si ay u dhisaan tillaabooyin iyo barnaamijyada keydinta tamarta, iyo ugu dambeyntii in la gaaro ujeeddada hagaajinta tamarta guud. heerka hufnaanta maareynta iyo ka faa'iideysiga aagga geedka.
Awooda tamarta ee nidaamka maaraynta tamarta warshad
Kadib markay soo bandhigaan xalalka maaraynta tamarta warshadaha, macaamiisha waxay xaqiiqi karaan faa'iidooyinka soo socda:
7 * 24-saac-kormeer waqtiga-dhabta ah: Qalabka maaraynta tamarta wuxuu taageeraa biraawsar shabakadeed, adeegsadayaashu waxay ku kasban karaan kormeerka waqtiga-dhabta ah ee xaaladda hawlgalka iyo heerka isticmaalka tamarta ee qalabka kala duwan ee aagga geedka iyada oo loo marayo aaladda smart, waxayna leeyihiin a shaqo-qaylo-waqtiga-dhabta ah si loo qabsado isticmaalka awoodda aan caadiga ahayn.
Muuqaalka Tamarta: Macaamiisha waxay heli karaan faham guud oo ku saabsan isticmaalka waaxyo kala duwan iyo warbaahinta isticmaalka tamarta kala duwan iyada oo loo marayo kanban tamarta nidaamka maareynta tamarta. Macaamiilku waxay wax ka baran karaan heerka qalabka si faahfaahsan iyada oo loo marayo biraawsarka shabakadda, la qabsado macluumaadka tamarta wakhti kasta iyo meel kasta, oo ay u istcimaalaan isticmaalka tamarta ee aan caadiga ahayn ee isticmaalka tamarta qalabka, saadaalin kara suuragalka suurta galnimada qalabka, yareynta heerka qalabka dhicitaanka.
Samee istaraatiijiyad lagu keydiyo tamarta sayniska: Maamulayaasha qalabka ayaa xallin kara dhibaatooyinka sida qaladka-qaladka ah iyo xog aan sax ahayn akhrinta mitirka aadanaha iyada oo loo marayo nidaamka maareynta tamarta smart, falanqeeynta macluumaadka isticmaalka tamarta ee qaybaha kala duwan iyo qalabka waqti habboon, oo xakameeya tamarta muhiimka ah isticmaalka iyo kharashka tamarta. Samee istaraatiijiyooyinka tamarta oo kor loogu qaado maaraynta tamarta
Samee tilmaamayaasha waxqabadka tamarta macquulka ah: Iyada oo loo marayo kormeerka tusaha firfircoonida tamarta iyo falanqaynta, ka dibna jaangooya hab dhaqanka isticmaalka tamarta, xog aruurin ayaa loo fulin karaa iyadoo loo eegayo aqoon isweydaarsiyada, waaxaha, howlaha, kooxaha, khadadka wax soo saarka ama qalabka, iyo tusayaasha qiimeynta tamarta KPI waxay noqon karaan loogu talagalay in lagu gaaro yoolalka ilaalinta tamarta.
Maskax ka saar qiimaha korantada iyo hagaajinta hufnaanta tamarta: warbixinta guud ee nidaamka maareynta tamarta waxay weydiin kartaa xog taariikhi ah khadka tooska ah, waxayna leedahay tirakoobyo tamar kala duwan iyo aalado falanqeyn si loo garto loopsyo leh awood hoose iyo hirgelinta tillaabooyinka horumarinta awooda; Isticmaalka korantada qaylodhaanta dalabaadka, falanqaynta isbeddelada, xiirashada ugu sarreysa iyo buuxinta dooxada iyo xakamaynta xamuulka xakamaynta daminta si loo yareeyo baahida ugu badan ee tamarta lagana ilaaliyo ganaaxa xad dhaafka ah ee isticmaalka korantada.
Maareynta Korantada Warshaddu waxay ku habboon tahay elektiroonigga, gawaarida, birta, mashiinnada, cuntada, daawada iwm.